ICG oo ka digtay dagaallo qabaa’il, xilli DF iyo Beelaha Hawiye isku dhaceen |
ICG oo ka digtay dagaallo qabaa’il, xilli DF iyo Beelaha Hawiye isku dhaceen
buy Zenegra, buy clomid. Inkastoo Ciidamada Malitariga Dowlada Soomaaliya guul ka gaareen dagaalyahanada ka horjeeda ee Al-shabaab ayaa hadana waxaa la sheegayaa in Al-shabaab ahaan doonaan kuwo sii jira kana dagaalama Soomaaliya, hadii aanay Dowlada iyo la howlgalayaasheeda Caalamiga wax ka qaban dhibaatooyinbka Bulshada ee inta badan qabaa’ilka ku saleysan,sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Hay’adda falanqeysa xasaradaha adduunka “International Crisis Group” “ICG”.
Muranka maamulka goboleedyada iyo is-qanb qabsiga bulshada dhexdeeda oo is-biirsada ayay hay’ada ku micneysay inay hoos u dhigeyso dadaalada lagu doonayo in horay loogu sii wado geedi socodka Nabada la doonayo in lagu xasiliyo geyiga Soomaaliya.
“Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Xulafadeeda waxay u baahan yihiin inay xidadka u siibaan Al-shabaab, laakiin wali waxaa dalka ka jira muran siyaasadeed oo gudaha ah” ayuu yiri Cedric Barnes, oo ah agaasimaha mashruuxa Hay’ada falanqeysa xasaradaha adduunka ee Geeska Africa.
Si looga gudbo dhibaatoyinka ay ka mid yihiin muran siyaasadeedka iyo dagaalka Al-shabaab ayuu mas’uulkaan wuxuu Dowlada Soomaaliya kula taliyay inay xooga saarto xasilinta deegaanada laga saaray Al-shabaab ee ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo waliba inay siyaasad cad ka yeelato sida laga yeelayo maamul ahaan deegaanadaasi.
Warbixinta ay soo saartay Hay’ada falanqeysa xasaradaha adduunka Ee “ICG”, ayaa sidoo kale lagu sheegay in caqabada ugu weyn ee hada Soomaaliya ka jirta beesha caalamkana ay aqoonsan tahay ay tahay Al-shabaab oo xiriir la leh Al-Qaa’ida,iyagoo sameeya falal ka dhan ah amaanka,sida warbixinta lagu sheegay.
Hadalka ICG, ayaa imanaya xilli ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Weli Sheekh uu kaalin weyn ku lee yahay dagaal beeleedyada, isaga oo hubeeyey maleeshiyooyin, islamarkaana daba ordaya siyaasado ka dhan beelaha Hawiye.
Beelaha Hawiye ayaa aad uga carrooday markii Cabdi Weli uu gobolka Shabeelaha Hoose oo ay beelaha Hawiye ku badan yihiin raaciyey maamul saddex gobol ka kooban, oo ay ku jiraan Bay iyo Bakool, waxaana ay xiriirka u jareen dowladda.
Sida warbixinta lagu xusay Al-shabaab ayaa u muuqda kuwo sii cusbooneysiinaya weerarada ay ka geysanayaan Soomaaliya gaar ahaan xarumaha hay’adaha Dowlada iyo kuwa Caalamiga, waxaana Hay’ada ku tilmaantay weeraradaasi kuwo sii soconaya hadii aanay laga gudbin muranka siyaasadeeda ku saleysan ee Soomaaliya ka jira.
Sida laga warqabo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya u u badnaadaanee Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaa ka soo cusboonaaday dagaal beeleedyadii, iyadoo la isku afgaran la’ yahay maamul wadaaga iyo waliba sidii loo wada noolaan lahaa.iyadoo gobolada qaar ay ka soo baxeen maamul dhowr ah oo midba dowrkiisa maamuleed sheeganaya.
Ururka Al-shabaab waxay wacad ku mareen inay sii wadayaan dagaalada ay kala horjeedaan Dowlada Soomaaliya iyo Dowladaha kale ee kaabayan.